कुवेत पुगेकि चेली भन्छिन्, बिदेशमा नेपाली दाजुभाइले सहयोग गर्ला भन्दा लभ पो गरम भन्छन! – Online Khabar 24
विदेशबाट फर्केकी आमाजु दिदीले कुवेतमा काम राम्रो छ भनेपछि पार्वतीले विदेश जाने सोच बनाउनुभयो ।
पार्वतीका तीन जना जेठानी देउरानी त अहिले पनि विदेशमा छन् । त्यसैले उहाँले रोजगारीका लागि विदेश कसरी जाने भन्ने कुरा कसैलाई सोध्नु पर्दैनथ्यो ।
छनलाई पार्वती र उहाँका श्रीमान् मुकुन्द अधिकारीको त्यति धेरै ऋण पनि थिएन । जग्गा बन्धकीमा राखेको ४० हजार रुपैयाँ तिर्नु थियो ।”
त्यसैले अब दोहोर्याएर विदेश जाने सोच छैन् पार्वतीको । उहाँले भन्नुभयो ‘परदेशमा श्रीमान्, छोराहरु र परिवार नसम्झेको दिन हुँदैनथ्यो । मन शान्ति कहिल्यै भएन । भनेजस्तो पैसा पनि कमाई भएन ।’कहिलेकाहीँ विदेश जाने कुरा उठ्दा पार्वतीका श्रीमान् मुकुन्दले भनिहाल्छन् ‘भो अब त्यस्तो कुरा नगर ।’ हुन पनि तीन वर्ष विदेश बसेर फर्केकी पार्वतीलाई मुकुन्दले कहिल्यै हेला गरेनन् । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevबैंकका कर्मचारीलाई अब हप्ताको तीन दिन छुट्टी !
next१२ सय तलबमा दुबई पुगेकी महिलाको एक वर्षभित्रै ५५ सय दिराम पुग्यो तलब … हेर्नुहोस कारण यस्तो रहेछ